အသက် ၂၄ နှစ် - စိုးရိမ်ပူပန်မှုအလွန်ဆိုးရွားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းအတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး ထံသို့စေလွှတ်ခြင်းခံရသည်။ တော်တော်များများသွားပြီ။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အသက် ၂၄ နှစ် - စိုးရိမ်ပူပန်မှုအလွန်ဆိုးရွားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုကျောင်းမှအကြံပေးတစ် ဦး ထံသို့ပို့ခဲ့သည်။ တော်တော်များများသွားပြီ။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီး၊ pmo ကို ၁၃ နှစ်အရွယ်တွင်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အသက် ၁၉ နှစ်ရှိသော်ထိုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သည်တစ်နာရီသာကြာပြီးနေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
youtube မှ ted ဗီဒီယိုများကြည့်နေစဉ် Gary Wilson ၏ tedx ဆွေးနွေးချက်မှတစ်ဆင့်ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုကျွန်တော်သိခဲ့ရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသည်ဟုထင်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းနောက်၌ထားခြင်း မှလွဲ၍ အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါ။ ဒီတော့ငါ့ရဲ့ nofap ခရီးစဉ် - ၂၀၁၄ နှစ်ကုန်ခါနီး၊ ကျောင်းကိုလျှောက်လွှာကိုလက်ခံခဲ့တယ်၊ အခုငါဘယ်လောက်အထိဝင်လာတယ်ဆိုတာကိုတောင်မသိဘူး။ ငါထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သောမှတ်တမ်းကကျွန်ုပ်သည်အတန်းတစ်ခုသို့သုံးကြိမ်မတက်ရကြောင်း၊ ကျောင်းသည်ငွေရှာပြီးနောက်တွင်ရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ငါဒီခေါင်းကိုတည့်တည့်ဝင်လာမယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၄ နို ၀ င်ဘာလလောက်ကစပြီး nofap ကိုစတင်ခဲ့တာပါ။ ငါစလုပ်တုန်းကတစ်ဝက်လောက်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ရိုးသားတဲ့ porn ဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပေးနိုင်လို့ပါ။
ငါနောက်ဆုံးမတ်လ5ရက် 2015 ခုနှစ်မှာအဖြစ်မှန်နှင့် porn ၏တစေ့တစောင်းအကြောင်းကိုတစ်ပါတ်အကြာတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အချို့လူများကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့ကြောင်းသတင်းပို့ကြသည်။ ရုတ်တရက်ပြင်းထန်သောအအေးမိခြင်းနှင့်လည်ပင်းမှလက်များသို့လက်ကောက်ဝတ်များအထိစီးဆင်းခြင်းကဲ့သို့သောဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာများကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တည့်တည့်မစဉ်းစားနိုင်သကဲ့သို့နွမ်းပါးနေသည့်ရက်နာသည့်ခံစားမှုကဲ့သို့နှစ်ပတ်လုံးနီးပါးခံစားခဲ့ရသည်။ တစ်လခွဲလောက်အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တကယ်သတိပြုမိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ထုတ်ယူခြင်းကဒီစွဲလမ်းမှုဟာတကယ့်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေပြီး“ မင်းဟာ shit လိုခံစားချက်မျိုးဟာမင်းရဲ့ ဦး နှောက်ပြန်လည်လည်ပတ်နေပြီဆိုတာသိသာထင်ရှားတဲ့သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်” ဆိုတဲ့အချက်ကိုငါသတိရနေခဲ့တယ်။
ငါတို့အားလုံးကြားချင်တာတွေ - nofap ကကျွန်မခံစားခဲ့ရတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုဖြတ်ပစ်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ကထိကကကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ဆီကိုပို့ပေးတဲ့အတွက်အရမ်းဆိုးလိုက်တာ။ ယခုမူကားငါရရှိသောတစ်ခုတည်းသောအရိပ်အယောင်ကကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးများကိုကြည့်နေကြောင်းသတိပြုမိစေသည်။ ယခင်ကကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှဘယ်သောအခါမျှမကြည့်ပါ။ အိမ်ပြန်ရန်စောင့်ဆိုင်းပြီးယင်းကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည် (ကျွန်ုပ်သည်ရည်းစားမရှိ၊ လိင်ဆက်ဆံဖူးခြင်းမရှိဟုသင်ထင်ပါသလော) ။ အခုတော့ငါချစ်စရာကောင်းတဲ့၊ ပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေး / မိန်းမတစ်ယောက်ဟာငါ့ဆီဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ပြီးသူမကျွန်တော့်ဘေးနားကပ်မရောက်ခင်အထိထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတောင်စဉ်းစားစရာမလိုဘဲတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အပျက်ကိုငါ့ကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်၊ ငါခဏရပ်နေတဲ့နေရာကိုရပ်ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်စဉ်းစားရတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုခံစားမိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုရက်ပေါင်းများစွာနေပြီးလုံးဝမနေပါကကျန်းမာနေမည်မဟုတ်ဟုကြိုတင်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
အခြားကောင်းသောအရာများမည်သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း။ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုသည်ပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်ခရီးသွားသောအချိန်၌ weirdos များနှင့်ပြည့်နေသည့်ရထားလမ်းကြောင်းတွင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်နှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ရရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ စာကြည့်တိုက်သို့သွားပြီးမည်သူမဆိုရှိပါကလေ့လာရန် သူတို့ရပ်တန့်ရန်နှင့်တခါတရံထ (သို့ထွက်ခွာထွက်ခွာရန်) အတွက်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည့်ဘူးသီး ထိုသို့သော nofap ၏တန်ခိုးပါ! ဟားဟား။ ငါစာသင်ရဲ့ပထမငါးပတ်လောက်မှာ fap သွေးဆောင်တဲ့မီးခိုးမြူတွေကြောင့်နိုးထခဲ့ရတယ်။ ဒီတော့လေ့လာမှုအများကြီးမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ငါမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုစွန့်ပစ်လိုက်တယ်၊ ငါသည်ဤနှင့်အတူဘယ်မှာသွားဘယ်မှာကြည့်ပါ။
လက်တွေ့လေ့ကျင့်သူတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုမျက်စိဖြင့်ကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်သည် (ယုတ်ညံ့သောသို့မဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ဘဲ) ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည့်မျက်နှာချင်းဆိုင်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်ပြီးပြီးနောက်တစ်ပတ်မျှနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ငါ့ကို (ဒီမှာဆောင်းရာသီပါပဲ) အအေးလွန်ကဲမှုလုံးဝမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်ပြောခဲ့တာကိုသတိရခြင်းအားဖြင့်လွန်ခဲ့သောတစ်လက၎င်းသည်တစ်နေ့လျှင် ၂-၃ ကြိမ်အကြိမ်အအေးလွန်ကဲနေသည့်ပထမဆုံးရေအေးသို့ခုန်ချလိုက်သည်။ ဒီဟာကသူတို့အတွေးအခေါ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတဲ့ nofappers တွေရဲ့ရေးသားချက်များမှာကျွန်တော်ဒီကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ငါကျိန်းသေသဘောတူလိမ့်မယ်။ မင်းတကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုမတော်တဆကြည့်လိုက်တဲ့အခါမင်းသိတယ်။ ငါအားကစားရုံအရူးတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဟာခက်ခဲတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့ပုံပေါက်နေတဲ့ယောက်ျားတွေလား၊ မင်းချက်ချင်းပုပ်သွားတယ်။ ငါအဲဒီလိုလူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရှာဖွေပြီးသူတို့ကိုစိုက်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် nofap နဲ့ပေါင်းပြီးအအေးလွန်ကဲပြီးတဲ့နောက်ငါမလှုပ်ရှားနိုင်လောက်အောင်နည်းနည်းညိတ်သလိုလေးစားမှုကိုတောင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါ့အပြင်အအေးမိတဲ့အတွက်ရေချိုးခန်းထဲမှာခုန်မသွားခင်ခွေးလမ်းလျှောက်ခြင်းအပြင်ရေချိုးခန်းထဲကိုအနည်းငယ်ဖိအားပေးတာတွေအပြင်လေ့ကျင့်ခန်းမရှိဘဲဘောင်းဘီအရွယ်အစားကိုကျခဲ့ပါတယ်။ ငါ nofap မတိုင်မီတစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်မှလေးကြိမ်ခန့်ရှစ်ကီလိုမီတာပြေးမည်။
ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူရရှိသွားတဲ့, တိုက်ပွဲကတော့မိနစ်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမ။ ငါအလုပ်များနေ့ကထို့နောက်အထက်တန်းကျောင်းကနေမိသားစုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတက်တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်ရင်တောင်နေပါစေငါကို run ပြီးပြီမည်မျှကီလိုမီတာ, porn စောင့်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းအမြဲပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ 90 အတိတ်ဖန်ဆင်းပါတယ်, အခု 120 ရက်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသက်သတ်လွတ်အစားအစာချမှတ်အပါအဝင် nofap အပေါ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အကြံဉာဏ်များစွာကြိုးစားခဲ့ပါတယ်, ယုတ္တိဗေဒနည်းသောတိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့်အတူကျန်းမာသောအစားအစာဟာလိင်စိတ်သို့မဟုတ်သမျှကိုလျော့နည်းစေတယ်လေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့အဘို့ပြီးပြည့်စုံသောဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်, ငါသည်နှစ်ထပ်ကွမ်း horny ခံစားခဲ့ရထွက်ဖိတ်ဖို့ ပတ်သက်. ရမ္မက်ခံစားရမယ်လို့; ကျွန်မ ပို. ပင်စိတ်ပျက်ခံစားခဲ့ရအပေါင်းတို့နှင့်အချိန်ကိုချွတ်လူရှုပ်ချင်တယ်။ အကြှနျုပျ၏ယူဆချက်ငါ PMO နှင့်အတူလိင်တွဲငါ့စိတ်ကိုအေးစက်သောကွောငျ့ကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်ငါမသိစိတ်ကသူတို့-bits ထွက်စစ်ဆေးနေခြင်းနှင့်ဒါပေမဲ့မျက်စိ-to-မျက်စိသည်သူတို့ကို objectifying မဟုတ်, မျက်မှောက်၌ရှိသမျှသောမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူပြိုင်ပွဲစိုက်ကြည့်နဲ့တူသလိုပဲအဘယျသို့ရှိသည်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။
ယခုမှာငါသည်သင်တို့၏ထောက်ခံမှုလိုအပ်ပါတယ်။ ငါ uni ၏ပထမစာသင်မှတဆင့်ခြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ရှိမရှိမသေချာဘူး။ မရလျှင်သင်ကျောင်းငါ့ကိုထွက်ကန်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ ငါလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဖြတ်သန်းပေမယ့်လက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ငါ့အားတကယ်အရေးကြီးသောဖြစ်လာသည်။ အစဉ်အမြဲငါဘာမှအကြောင်းအများကြီးဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်အမြဲတမ်းခေါင်းမာဖောက်ရာဖြစ်ခြင်းအလုပ်များခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှအနည်းဆုံးခုခံ၏လမ်းကြောင်းကိုယူသူတစ်ဦးအဖြစ်။ ငါစာသင်၏အဆုံးဆီသို့ဦးတည်ခဲ့တူသောငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်လျှောက်ထားဖူးပါဘူး။ တကယ်ပဲငါ့ကိုအကောင်းပြုတစ်ခုခုဆီသို့ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏ငါ့ကိုထားရှိမည်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အပေါငျးတို့သအကြောင်းအရာများပါရှိခြင်း။ ငါသေချာပေါက်မပျော်ရွှင်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့သကဲ့သို့ငါ၏အသက်တာ၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ငါခံစားရတယ်။ ငါစိတ်ဓာတ်ကျခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်ငါခြေလှမ်းငါ့ကိုပယ်ရာ၌မိတ်ဆွေများကိုမွငျလြှငျအဘို့ (ထိုညာဘက်ရဲ့ငါဝိဇ္ဇာကာလအတွင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတစ်ခုခုမိတ်ဆွေများကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏) re-ယူရှိသမျှကိုအတန်းခဲ့ရင်တောင်ငါဝမ်းမြောက်စွာလို ညာဘက်ကျောထဲမှာခုန်။
TL; ဒေါက်တာ: nofap မှတဆင့်ကျွန်မဖြစ်လာချင်သောလူတစ်ဦးမြင်ကြပြီ။ ငါသာငါ့မျက်စိ၏ထောင့်ကနေ, မှားတဲ့အခန်းသို့လဲငါလိုအပျသောအရာကိုမြင်ရပေမယ့်ယခုငါဖမ်းနိုင်မီငါထွက်ကန်ရစေခြင်းငှါ, ဝမ်းနည်ခဲ့ပါဘူး။ yeah, အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းလွန်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။
LINK - 100 + ရက်ပေါင်း nofap, 30 + ရက်ပေါင်းအအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းသတင်းပို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်နှင့်ထောက်ပံ့မှုအတွက်တောင်းဆိုရန်။